Libaaxyada Naadiga: Choupo-Moting ku lug leh shil - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS »Libaaxyada Kulanka: Choupo-Moting ku lug leh shil
Libaaxyada Kulanka: Choupo-Moting ku lug leh shil
Ciyaaryahanka reer Cameroon, sida caadiga ah aad ayuu u xasilan yahay, wuxuu leeyahay waqti adag. Subaxnimadii, wuxuu ahaa dhibanaha shilka markii uu socday tababarka Camp des Loges. War saxaafadeedka Faransiiska, oo tan iyo markii la soo weeraray, ayaa sii wadi doonta. Waxa uu istaagay ka dib markii uu ku dhuftay gaari yaqaan, ka hor inta uusan sii wadin ka dib markii uu hubiyey in sarkaal maamul PSG ayaa ku sugnaa si ay u dhamaystiraan rasmiga.
Sheekada of lequipe.fr
Muuqaalka dareenka, habeenkii axadda ee barafka PSG ka dhanka ah Strasbourg (1-1), taas oo uu ku dhaliyay gool oo looga hortagi Christopher Nkunku Eric Choupo-Moting ururayaa dhibaato: Thursday in 10 30 pm at Saint-Germain-en-Laye, weeraryahanka Cameroon galay oo ku dhacaya shil gaari kale. Dhacdadan ayaa ka dhacday madaxweyne Kennedy Avenue, waddo hal dhinac ah oo u horseedaya Camp des Loges, xarunta tababarka ee PSG.
Choupo-Moting ayaa gaariga ku dhuftay gaarigiisa isaga oo cararay. Darawalku waxa lagu daryeelay dab-damisyada ka dib markii uu ka cabanayay dhabarka afka ilmo-galeenka. Waqtiga shilka, Jaime Teixeira, agaasimaha Camp des Loges iyo gacanta midig ee agaasimaha isboortiga Antero Henrique, ayaa raacay Choupo-Moting. Wuxuu qabtay dukumintiyada, wuxuuna u sheegay inuu ciyaari karo tababarka.
Waxaa laga soo xigtey: Camfoot
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/11/lions-en-club-choupo-moting-implique-dans-un-accident/
Ligue1-14e journée : Unisport du Haut-Nkam stoppé dans sa remontada
Youssoufa Moukoko, Xiddiga dhalinta yar ee reer Cameroon ee Borussia Dortmund ayaa heshiis qandaraas ah kula saxiixday Nike. - Culturebene